ရှုံးနိမ့်ပေမဲ့ ထိုးကြေး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဘစ်ဒတ်ချ်ဆီကနေ ရရှိမယ့်အောင်လ ဘာကြောင့်ယခုလိုရရှိတာလဲ? A – Alanzayar
ရှုံးနိမ့်ပေမဲ့ ထိုးကြေး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဘစ်ဒတ်ချ်ဆီကနေ ရရှိမယ့်အောင်လ ဘာကြောင့်ယခုလိုရရှိတာလဲ? A
ရှုံးနိမ့်ပေမဲ့ ထိုးကြေး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဘစ်ဒတ်ချ်ဆီကနေ ရရှိမယ့်အောင်လ ဘာကြောင့်ယခုလိုရရှိတာလဲ?
ရှုံးနိမ့်ပေမဲ့ ထိုးကြေး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဘစ်ဒတ်ချ်ဆီကနေ ရရှိမယ့်အောင်လ ဘာကြောင့်ယခုလိုရရှိတာလဲ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် ….
ရှုံးနိမ့်ပေမဲ့ ထိုးကြေး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဘစ်ဒတ်ချ်ဆီကနေ ရရှိမယ့်အောင်လ ဘာကြောင့်ယခုလိုရရှိတာလဲ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် …. ရှုံးနိမ့်ပေမဲ့ ထိုးကြေး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဘစ်ဒတ်ချ်ဆီကနေ ရရှိမယ့်အောင်လ ဘာကြောင့်ယခုလိုရရှိတာလဲ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် ….
Previous Article မြို့နယ် (၃၃)ခု အင်တာနက်ထပ်မံဖြတ်တောက်
Next Article မင္းသမီးရဲ႕ေဘာ္ဒီကိုခြဲစိတ္စစ္ေဆးရာအလိမ္အညာမ်ားဘူးေပၚသလိုေပၚ A